कसरी पाउने भगवानको आशीर्वाद ? गर्नुहोस् यी ४ कार्य ! – NepalajaMedia
हिन्दु धर्मसँग जोडिएका सबै कार्यहरूमा विश्वास गर्दा हिन्दु धर्मवालीहरूको जीवन धन्य हुने बिश्वास गरिन्छ। हिन्दु धर्मअनुसार, यदि आफ्नो घरमा नियमित जसो पाठ पुजा गरेमा देवी देवताको वास हुनका साथ साथै सदैव फलिफाप वा जीवन सुखमयसँग बित्नेछ । जसकारण हिन्दु धर्मवालीहरू दिनहुँ जसो पूजा आराधना गर्ने गर्छन्।
जुन घरमा पाठ पूजा नियमित रूपमा गरिन्छ। उक्त घरमा कुनै दुख पी*डा नहुने सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने तथा सुख समृद्धि आउने धार्मिक विश्वास छ । त्यसैले नियमित जसो पूजा गर्ने बानी बसाल्नुपर्दछ ।
हिन्दु धर्म अनुसार, तुलसीलाई शक्तिको प्रतीक मानिन्छ । त्यसैले नियमित तुलसीको पूजा गर्ने हो भने घरमा केही कुराको कमी नहुनका साथै नकारात्मक ऊर्जालाई पनि नष्ट गर्दछ । सो कारण आफ्नो घरमा तुलसीको बिरुवा रोप्ने गरिन्छ
यदि तपाइको घरमा भएको मन्दिरको ढोका पश्चिम दिशा तर्फ फर्केको छ भने त्यसलाई अत्यन्तै शुभ मानिने गरिन्छ । त्यसैले पूजा गर्दा खेरि पनि सोही दिशातर्फ गर्नुहोस् ।
गाईको गोबरलाई निकै पवित्र मानिन्छ। महाभारतको अनुशासन पर्वका अनुसार गाईको गोबर महालक्ष्मीको निवास हुने गर्दछ। त्यसैले जुन ठाउँमा गाईको गोबरले पोत्ने गरिन्छ, त्यो ठाउँ पवित्र हुने गर्दछ।साथै माता लक्ष्मीको कृपा पनि मिल्ने बिश्वास गरिन्छ ।
Prevदिउँसै लुटपाट गर्ने तीन महिलासहित चार जना प’क्राउ
Nextनेपाली ‘साथी’ मिलेर मलेसियामा धीरेन्द्रका खुट्टा का’टिदिए, सापटी दिएको पैसा फिर्ता माग्दा यस्तो भयो